ရုတ်တရက် ကြွက်တက်လာရင် လုပ်ပေးနိုင်သော အချက်များ 🦶 - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ကြွက်တက်တယ်လို့ လူသိများကြတဲ့ Muscle cramp ဟာ ရုတ်တရက်ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပြီး ကြွက်သားများ တင်းကြပ်ပြီး ကျုံ့နေတဲ့ အတွက်ကြောင့် နာကျင်မှုခံစားရတဲ့ အခြေအနေကိုကြွက်တက်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ကြွက်တက်တာဟာ ရုတ်တရက်ဖြစ်ပြီး ကြိုတင်မှန်းဆ မရနိုင်သလို အဖြစ်များကြပါတယ်။
ကြွက်တက်တဲ့အချိန်မှာ contraction ကြောင့် နာကျင်မှုကိုခံစားရပြီး အခြားသော ကြွက်သားအဖွဲ့အစည်းပေါ်ကိုလဲ သက်ရောက်ပါတယ်။အဖြစ်များတဲ့ နေရာတွေကတော့ lower leg ရဲ့ နောက်ဘက် ခြေသလုံး နဲ့ ပေါင်ရဲ့ ရှေ့ဘက်ရော နောက်ဘက်တွေ မှာပါဖြစ်ပါတယ်။
ညဘက် ရုတ်တရက် နိုးလာချိန်မှာ ကြွက်တက်တာကို ကြုံတွေ့ရရင် muscle cramp ဟာ အလွန်နာကျင်တယ်ဆိုထားကို သိထားရပါမယ်။ အန္တရာယ်မရှိပေမယ့် muscle cramp ဟာ affected muscle တွေကို ခဏတာ လှုပ်ရှားမရအောင်ဖြစ်စေပါတယ်။
📌ကြွက်တက်တဲ့ အကြောင်းအရင်း (7)ချက်ရှိပါတယ်
1. Muscle တွေကို အရမ်းအားစိုက်အသုံးပြုချိန်
2. Nerve ကြောတစ်ခုခုကို ဖိမိထားချိန် (ဥပမာ- Spinal cord injury)
4. Calcium, Magnesium, Potassium စတဲ့ electrolyte ဓါတ်များ နည်းခြင်း
5. Muscle တွေမှာ သွေးလုံလောက်စွာမရရှိတဲ့အချိန်
7. အချို့ရောဂါ တွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
📌ရုတ်တရက် ကြွက်တက်လာရင် ဘာလုပ်ပေးရမလဲ ❓
– တင်းမာပြီး နာနေတဲ့ နေရာမှာ အကြောပြေဆေးလိမ်းပေးပါ (eg. voltex)
– ကြွက်တက်နေတဲ့နေရာကို ဆွဲဆန့်ပေးခြင်း (Stretch affected muscles)
– ကြွက်တက်နေတဲ့ နေရာကို လက်နဲ့ message လုပ်ပေးခြင်း (ဒါမှမဟုတ်) rollerတစ်ခုခု နဲ့ လှိမ့်ပေးခြင်း
– မတ်တပ်ထရပ်ပြီး လမ်းပတ်လျှောက်ပေးပါ (Stand up and walk around)
– Ice pad or heating(Warm) pad ကပ်ပေးခြင်း
– ကြက်သီးနွေးရေနဲ့ ရေချိုးပေးခြင်း( Takeanice warm bath)
– Muscle relaxant သိုမဟုတ် Painkiller တစ်ခုခုသောက်သုံးပေးခြင်း
– ခြေထောက်ကို မြှင့်ထားခြင်း ထောင်ထားခြင်း (Elevate) စတာတွေချက်ချင်း လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
– ပြင်းထန်တဲ့ muscle လေ့ကျင့်ခန်းများမှ ရှောင်ခြင်း
– Body weight ထိန်းခြင်း
– Magnesium ကြွယ်ဝသော အစားအစာများစားခြင်း
– Calcium ကြွယ်သော အစားများစားခြင်း
– အုန်းရေ Coconut water သောက်ပေးခြင်း
( အုန်းရေမှာ calcium, magnesium, potassium, phosphorus နဲ့ sodium စတဲ့ electrolyte ဓါတ်တွေကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပါတယ်)
– Avocado, Water melon, Coconut water, Sweet potato, Greek yogurt, Bone broth, Papaya, Beets Green, Fermented foods, Salmon, Smoothies, Sardines အစရှိတဲ့ အစားအစာများစားသုံးပေးခြင်း
– ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်တွင် သင့်တော်သော Calcium, Magnesium ပါဝင်သော အားဆေးသောက်သုံးခြင်း
– ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်များ နှင့် improper footwearများ စီးခြင်းမှရှောင်ခြင်း
– နေ့စဉ် Mild exercise လုပ်ပေးခြင်း
– အရက်အလွန်အကျွံသောက်ခြင်းမှ ရှောင်ခြင်း စတဲ့အချက်တွေကို လုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့် ကြွက်မတက်အောင်နဲ့ ရုတ်တရက် ကြွက်တက်ခြင်း အန္တရာယ်မှ ကာကွယ်ရှောင်ရှားနိုင်ပါတယ်။